Akụkọ - Ngosipụta mmekọrịta
Ọ bụrụ na oge etiti etiti ekpughere abụọ dị mkpụmkpụ karịa oge achọrọ maka igwefoto iji mezue usoro foto ahụ, igwefoto ga-echefu foto ndị ewepụtara n'ihi na ọ nweghị ike mezue ikpughe ya na oge. Ya mere, n'ime ọrụ ahụ, a ga-eji teknụzụ mmekọrịta mmekọrịta igwefoto iji mee ka ngosipụta igwefoto ahụ dị n'otu.
Usoro nwere ike ịlele oge- "T" dị n'etiti drone na-eziga mgbaàmà na-ebute na oge ikpughe nke oghere ọ bụla. Ọ bụrụ na oge dị iche "T" nke anya m ise dị n'ime ekwe ekwe, anyị na-eche na ise anya m na-arụ ọrụ synchronously. Ọ bụrụ na ụfọdụ nzaghachi nzaghachi nke anya m ise dị ukwuu karịa uru ọkọlọtọ, ngalaba njikwa ga-ekpebi na igwefoto nwere nnukwu oge-oge, na na ngosipụta na-esote, a ga-akwụ ụgwọ oghere ahụ dị ka ihe dị iche, na n'ikpeazụ ise anya m ga-ekpughe synchronously na oge-iche ga-mgbe niile n'ime ọkọlọtọ nso.
Nke gara aga ：Kedu otu ụdị GSD na ụdị ụgbọelu ndị na-ebu ụgbọ mmiri si emetụta usoro 3D dabara adaba
Osote:R&D akara nke usoro ngwaahịa Rainpoo